ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) တစ်ခုစီရှိတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုသည် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်က လေးစားလိုက်နာမှုသက် သေ အထောက်အထားကိုစနစ်တကျရှာဖွေပေးမည့် နိုင်ငံ၏ဥပဒေရှုထောင့်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားသည်။ VPA ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများအားလုံးကို ထပ်ပြောရန် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်အဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ အရေးအကြီးဆုံးဟုဆုံးဖြတ်သည့် ဥပဒေရေးရာ လိုအပ်ချက်အစိတ်အပိုင်းကိုသာအဓိထား ကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ တရားဝင်သစ်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ပို၍သေချာစေပါသည်။ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုသည် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတွင်သစ်တောကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ဥပဒေများစွာရှိပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန် စိန်ခေါ် မှုများ နှင့် ကြုံတွေ့နေရချိန် သို့မဟုတ် ဥပဒေများအကြား ကွဲလွဲမှုများရှိသည့်အချိန်တွင် အလွန် အသုံးဝင် သည်။
သစ်နှင့်သစ်ထွက်ပစ္စည်းများသည် VPA ၏စည်းကမ်းချက်များအရ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဥပဒေများကိုလိုက်နာလျှင် တရားဝင်ဖြစ်သည်ဟုယူဆသည်။ တရားဝင်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားသည့်သစ်နှင့် သစ်ထွက်ပစ္စည်းသည် FLEGT လိုင်စင်များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီပါသည်။ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်အတွက်အသက်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ အခြားသော နည်းပညာပိုင်းရှုထောင့်များအားလုံးသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှစီးဆင်း လာပါ သည်။
တရား၀င်ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၏ အတိုင်းအတာနယ်ပယ်
တရား၀င်ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် '''သစ်ခုတ်ခြင်း အခွင့်အရေးများ ခွဲဝေခြင်းမှသည် အချောထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပတင်ပို့ရောင်းချခြင်းနှင့် အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေယူခြင်းအထိ'' ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများပါ၀င်သင့်သည်။
ထို့ပြင်တရား၀င်ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များကို ၎င်းတို့ ပါ၀င်လိုသည့် နိုင်ငံ၏ ဥပဒေရေးရာမူဘောင်ကို ထင်ဟပ်နေရမည်။
ထို့ကြောင့် တရား၀င်ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အတိုင်းအတာနယ်ပယ်သည် သစ်တောဥပဒေထက်ကျော်လွန်ပြီး အခွန်အခ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်မှု၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာလုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ ဇီ၀မျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အကောက်ခွန်ဥပဒေရှုထောင့်များ ပါ၀င်နိုင်သည်။
EU သည် တရား၀င်ဖြစ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ပါ၀င်သည့်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြားနေသာဖြစ်သည်။ သို့သော် မိတ်ဖက်နိုင်ငံအနေနှင့် '''စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်'''စသည့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေခံသုံးချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား မူဘောင်ရေးဆွဲနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်သည်။
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ယုံကြည်မှုရှိနိုင်စေရန်အတွက် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူ များ အားလုံး၏ ထောက်ခံမှုရရှိသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် EU မှ အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အများဆန္ဒကို ပြည်သူ များအားလုံးပါဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ရရှိသင့် သည်ဟုထောက်ခံအကြံပြုထားပါသည်။ တရားဝင် ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပြည့်စုံသောအလွှာစုံမှအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ၏ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုသည် ကွာဟမှုများ၊ တစ်သမတ်တည်းမဖြစ်မှုများနှင့် ဥပဒေတွင် ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်နေမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် လိုအပ်သည့်ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ကို မည်ကဲ့သို့စဉ်းစားရန်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရန် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်နည်း နှင့်သာဆောင်ရွက်ကြသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်အများစုရှိ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ ချဉ်းကပ်မှုများသည် ပုံ ၈ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်များပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် တစ်လမ်းသွား မဟုတ်ပါ။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအများအပြားပါဝင် ဆွေးနွေးကြသည်ဆိုသောအချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်း စားပါကဆက်ကာဆက်ကာဖြစ်ပွားသော ကပြောင်း ကပြန်ဖြစ်မှုများဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
ပုံ ၈နိုင်ငံအဆင့် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များမှ တရားဝင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သဘောတူနိုင်သည့် ဥပမာလုပ်ငန်းစဥ်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်အများစုတွင် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာ၌ ပထမဆုံးအဆင့်မှာ အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်တွင် အကျိုး ဆက်စပ် ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့တိုင်းသည် ၎င်းတို့အဖွဲ့အကြား တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန် အတွက် ဦးစားပေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုံရပ်တည်ချက်ရအောင် ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရပါသည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့တစ်ခုစီသည် ဥပဒေကို ခြားနားစွာသဘောပေါက်ကြသည်။ အစိုးရများ အတွက် စိတ်ဝင်စားမှုမှာ ဥပဒေကိုကျင့်သုံးရန်နှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးမှုရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများအတွက် စိန်ခေါ်မှုမှာ ဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာလူထုအတွက် အရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်မှာ အခွင့်အရေးများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ဥပဒေကို အားကိုးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ အလွှာစုံမှ အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဖွဲ့တစ်ခုစီ၏လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေး သကဲ့သို့ အဖွဲ့တိုင်း၏ထောက်ခံမှုရရှိသည့်အတွက် စစ်မှန်ပြီး လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် တရားဝင်ဖြစ် ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရရှိပါလိမ့်မည်။
VPA မှလေးစားလိုက်နာသင့်သည့် ဥပဒေအပိုဒ်ခွဲများကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရန် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ က သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင်ရှိနေသော တည်ဆဲဥပဒေများကိုစီစစ်ပါသည်။ ဥပဒေအပိုဒ်ခွဲ များကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရန်မှာ အလွန်ကြီးမားသောအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ အင်ဒိုနီးရှားတွင် သစ်တောကဏ္ဍ နှင့်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဆက်စပ်နေသောအမျိုးသားအဆင့် သို့မဟုတ် ဒေသအဆင့် ဥပဒေစုစုပေါင်း ၉ဝဝ ကျော်ရှိသည်။
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေအားလုံးပါဝင်ရန်မလို အပ်သော် လည်း အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ဉပဒေအပိုဒ်ခွဲနှင့် ၎င်းဥပဒေအား လေးစားလိုက်နာမှုကို ဆန်းစစ်အတည်ပြုရန်အတွက်လည်းလက်တွေ့ကျရပါမည်။ အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက် သူများသည် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်များကို ညွန်ပြသည့်ဥပဒေများတွင် လစ်ဟာမှုများ သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုများကို ဖော်ထုတ်ကောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ပါမည်။
အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့် အဖွဲ့များသည်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်သည့် ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ သွင်းအားစုများ အပေါ်အခြေခံ၍ မူကြမ်း ရေးဆွဲပါသည်။ မတူညီသော နိုင်ငံများသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် မူကြမ်းရေးဆွဲရန် မတူညီ သောနည်းလမ်းများနှင့် ချဉ်းကပ်ကြသည်။ အချို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း သည့်အဖွဲ့များသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲကြသည်။ အချို့သည် မူကြမ်း ရေးဆွဲရန် အလွှာစုံအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပါသည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် အလွှာစုံမှအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် အမျိုးသားအဆင့်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များကို တရားဝင် ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မူကြမ်းရေးဆွဲရန် ခန့်အပ်ပါသည်။
တရားဝင်ဖြစ်မှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းရှုထောင့်တွင် ပါ၀င်နေသည်များမှာ။ ။
သစ်တော ခေါင်းစဉ်များအား ခွဲဝေပေးခြင်း
အချိန်ကာလကန့်သတ်၍ ငှားရမ်းမှု/အသုံးပြုမှုများ အခွင့်အရေးအပေါ် လေးစားမှု
ကုမ္ပဏီများ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ
အချို့သောနိုင်ငံများသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးမှ မွမ်းမံကြ သည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းများသည်ဥပဒေအပိုဒ်ခွဲများရှိလစ်ဟာနေမှုများ သို့မဟုတ် ပြသာနာများ နှင့် လေးစားလိုက် နာမှုကိုမည်ကဲ့သို့စစ်ဆေးအတည်ပြုမည်ကိုဖော်ထုတ်ရန်အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အပြီးသတ်တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းဂရစ်ကွက် သို့မဟုတ် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းဇယားဟုခေါ်သောဇယားပုံစံနှင့်ရှိပါသည်။ ဇယားကွက်များသည် တရားဝင်ကြောင်း အညွှန်းကိန်းများကိုဖော်ပြပြီး ၎င်းသည်ဥပဒေတွင် အကြမ်းဖျဉ်းဖော်ပြထားသည့် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြလျက် လိုအပ်ချက် များကိုထိန်းသိမ်းလိုက်နာကြောင်း သက်သေအထောက် အထားများကို လည်းဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းဇယားများသည် လေးစားလိုက်နာမှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်း လမ်းများ ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ အချို့သော VPAs များတွင် စိုက်ခင်းများ သို့မဟုတ် သစ်ထုတ်ကွက်များ စသည့် မတူညီသောသစ်ဇစ်မြစ်များ အတွက် ခြားနားသောတရား ဝင်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ ရှိကြသည်။
VPAs များအကြား တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ မည်သို့ကွဲပြားသည်ကို ပိုမိုသိရှိရန် VPA ဆိုင်ရာကိုးကားစရာများ၏ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ
EU. 2007. FLEGT Briefing Note 02: What is legal timber? European Union. [ဒေါင်းလုဒ်ရန်]